WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Kitchen Faucet with Side Sprayer, Oil Rubbed Bronze - Tubbooyinka Jikada ugu Fiican 2020 | Qasabadaha jikada ugu fiican | Qasabadda Jikada
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Rustic Bridge Jikada / WOWOW 8 inch
WOWOW 8 inch
Dhisida naxaas adag -Qasabadda buundada ee loo yaqaan 'centre-culus' waxay ka samaysan tahay naxaas adag oo culeyskeedu yahay 7.76 Ibs. Qasabadda weelka naxaasta leh ee leh nikkel dhammaystiran waa miridhku, daxalka, u adkaysiga daadinta, wuxuuna hubiyaa badbaadada biyaha iyo cimri dheer.
Laba Qaboojiye Qasabada Biyaha -Qasabadda jikada buundada waxay leedahay naqshad 2-gacmeed waxayna la timaaddaa tubooyin sahay ah (qabow & kulul), kuwaas oo gacan ka geysan kara xakameynta mugga biyaha iyo heerkulka si sax ah. Qaansada sare ee 360 ​​° qasabadda wareegga sidoo kale waxay ku habboon tahay saxammada labajibbaaran.
Buufiye Dhinaceedka Faashadda leh Tuubada La Jiido -Hal riixitaan oo badhan ah, buufiyeha dhinaca naxaasta ee cadaadiska sarreeya ayaa ku buufin kara durdur xoog leh oo biyo ah si uu u nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska. Tuubada lagu daray waxaa la jiidi karaa ilaa 59 inji, taas oo kuu sahlaysa inaad meel kasta nadiifiso sidaad rabto.
Adeegga macaamiisha -Jikada buundada 8 inch waxay ku raaxeysaneysaa 90 maalmood oo soo laabasho xaddidan iyo dammaanad 5 sano ah. Haddii ay jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan qasabadda biriijka naxaasta ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir, waxaan aad ugu farxi lahayn inaan soo bandhigno xal.
ABS Aerator oo laga saari karo
Mishiinka ABS ee laga saari karo oo tayo leh, looma baahna qalab.
Biyo xumbo u eg, jilicsan oo maqaar-u-fiican, ma biqlaan, dhaqid aan dan lahayn
Fududeynta taabashada jilicsan si looga saaro miisaanka iyo kalsiyumka si fudud.
2 tuubada naxaasta ah waxay kaa caawineysaa inaad si sax ah u xakameyso heerkulka biyaha iyo socodka biyaha.
Naqshad gacmeed gaar ah oo aad u fiican, oo ay ka buuxaan style retro & casriyeyn casri ah, shaki la'aan waxay jikadaada ku soo bandhigi doontaa tilmaamo indho qabad leh.
Iyada oo la riixayo badhanka, buufiyeha dhinaca naxaasta leh ee cadaadiska sarreeya ayaa ku buufin kara durdur xoog leh oo biyo ah si uu u nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska, waxay siisaa sahlanaan dheeraad ah si loogu shaqeeyo saxanka jikada.
Kaartooyinka Naxaasta Tayada kulul leh
Waxaa laga sameeyey naxaas iyo dhoobada, xoog leh oo si fiican u waaraya.
Filter ku dhex-jira, laba-faleebo anti-faleebo. Jawaab degdeg ah, ma fududa gabowga.
50,000 jeer oo ah imtixaannada dib -u -dejinta/dejinta, dhibic la'aan ama daadasho la'aan, ayaa la isticmaali karaa dhowr sano.
Naxaas adag Walxaha-waajibaad culus
Waxaa laga sameeyay naxaas adag oo culeyskeedu yahay 7.76 Ibs, waajibaad culus oo waara.
Naxaas - u adkaysta daxalka iyo miridhku.
Waa maaddo heerkeedu sarreeyo oo loo isticmaalo jikada iyo alaabta qubeyska, taas oo hoos u dhigaysa macdanta `` lead '' ee laga helo ilaha si loo hubiyo biyo caafimaad leh.
SKU: 23115A1RB Categories: Qubeyska jikada, Buundada Rustic Bridge Jikada Tags: qasabadda biriijka, Naxaasta Saliida Sunta Lagu Dhoobo
17.5 x 13.2 x 2.6 inji
Naxaas-Saliid lagu marsaday